Ny seza fiandrianan'ny onja / seza fiandrianan'ny mahery fihetsika sy fitarihana mahazatra | Cataclysm, tranomaizina | WoW Guides | WoW Guides
Ny seza fiandrianan'ny tide / torolàlana an'ny torolàlana mahery fo sy mahery
Seza fiandrianan'ny onja Izy io dia trano-maizina ho an'ny mpilalao amin'ny ambaratonga 80-82 ary anisan'ny sarotra amin'ny Abyssal Maw. Ity faritra ity dia miorina ao Vashj'ir ary na dia misy fidirana roa aza dia iray ihany no misokatra.
Na dia any anaty rano aza izy io, dia ao anaty zohy anaty rano no anaovana ilay trano-maizina. Izy io dia faritra voaorina tsara amin'ny fomba kanto ary misy fihaonana tsy manam-paharoa, izay tsy maintsy hamonoantsika an'i Nagas sy ireo mpanompo sasany an'ny Andriamanitra taloha.
Seza fiandrianan'ny ranomasina / seza fiandohan'ny fidiran'ny sambo
fahasalamana: 1,787,160 - 3,734,730
ambaratonga: 82 / 87
Ny spora: Mandrotsaka tsiranoka holatra mahafaty amin'ny mpilalao sendra iray izay mipoaka amin'ny fiatraikany ao anatin'ny radius 5 metatra. Izay mpilalao ao amin'io faribolana io dia handray isa 10,000 isaky ny 3 segondra mandritra ny 15 segondra.
Geyser: Miantso ny geyser amin'ny toerana misy ny mpilalao. Rehefa afaka 5 segondra, nipoaka ny geyser, nahatratra 23750-26250 isa ny fahasimban'ny Frost ary nampiverina ny fahavalo rehetra tao anatin'ny 5 metatra.
Fipoahana tampoka: Mamely ny lasibatra amin'ny tselatra variraraka, manodidina ny 33,250 sy 36,750 / 141,375 sy 158,625 Teboka fanimbana voajanahary.
Sprinkler: Mamorona vortex rano mihodina izay mandondona fahavalo matetika ao anatin'ny 0 metatra. Ho fanampin'izany, ny vortex rano dia hivily lalana amin'ny famosaviana rehetra any amin'ny caster ary hahatonga ny fanafihana rehetra tsy hita. Maharitra 1 min.
Lady Naz'jar Izy no tompon'andraikitra voalohany tao amin'ny tranomaizina Throne of Tides. Amin'ny fiantombohan'ny ady dia hakatona ny bara hidin'ny efitrano ka alohan'ny hanombohan'ny ady.
Ity naga ity dia manana fahaiza-manao mahafinaritra. Ny fahaiza-manao mampidi-doza indrindra dia tsy misy fisalasalana Fipoahana tampoka, fahaizana izay tsy maintsy tapahina amin'ny tranga mety hisorohana ny fahasimbana be loatra. Ankoatr'izay, mandritra ny ady dia apetrany a Geyser eo ambanin'ilay mpilalao afaka 5 segondra eo ho eo, dia hipoaka tampoka rano iray ary tsy maintsy mihetsika alohan'izany. Farany, Lady Naz'jar dia hampiasa Mushroom Spores mandritra ny ady. Miadana ireo ary mandeha mazava ho any amin'ny mpilalao ka hiezaka ny hisoroka azy ireo amin'ny vidiny rehetra.
Amin'ny 66% sy 33% amin'ny fahasalamany dia hofonosiny a Sprinkler ary hisy mpamosavy an-dranomasina roa sy mpiambina voninahitra Naga. Zava-dehibe dia azo atao ny mampiasa miaraka aminy ny karazana fanaraha-maso vahoaka. Samy mampiasa ny fanafihana mitambatra sy rojom-by ny mpamosavy ka tsara ny mamono azy ireo alohan'ny Guard izay manafika melee. Ity iray ity dia hahatezitra ny fahasalamana 30% na dia tsy dia misy olana loatra aza. Lady Naz'jar no ho ao amin'ny Sprinkler mandritra ny 1 minitra na ho haingana, raha mamarana ny Nagas isika. Ireo dia tsy maintsy maty alohan'ny hamaranana azy io na mety hahita olana isika.
Fahasamihafana amin'ny maody maherifo
Amin'ny maody mahery fo, mandritra ny fotoana ampiasanao ny Geyser dia misy andiana eddies rano miseho izay tsy maintsy hialantsika. Ankoatr'izay, ny Fipoahana tampoka mahafaty tanteraka ny tanky ka tsy maintsy tapahina raha tsy tianao ho faty tsy azo sitranina izany.
Commander Ulthok / Commander Ulthok
fahasalamana: 1,116,975 - 4,149,700
Ozona amin'ny harerahana: Ozony lasibatra tsy misy dikany. Mampihena ny hafainganam-pandehan'ny hetsika sy ny haingam-pandeha 50%. Maharitra 15 segondra.
Fisaratsarahana maizinaUlthok dia namaky ny tany teo alohany, 56,550 ka hatramin'ny 63,450 isa ny fahasimban'ny Shadow ny fahavalo rehetra tao anatin'ny 7 metatra ny toerana nisy ny fiantraikany. Fanampin'izany, fisokafana maizina no misokatra eo amin'ny toerana misy ny fiatraikany, mahatratra 9,425-10,575 isa ny fahasimban'ny aloka isan-tsegondra ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 5 metatra. Misokatra 1 minitra ireo triatra ireo.
Tezitra: Tezitra i Ulthok, mampitombo ny fahasimbana ara-batana rehetra atrehana 50% mandritra ny 10 segondra.
manenjika: Raiso ny mpilalao tsy an-kanavaka ary potsero izy ireo, mandratra 5,000 / 12,500 Ny fahasimban'ny aloka isaky ny segondra mandritra ny 6 segondra.
Aorian'ilay Lady Naz'jar dia hiatrika ity tsy misy endrika ity isika.
Ny fahaizana manan-danja indrindra amin'ity ady ity dia Fisaratsarahana maizina, izay hampiasain'i Ulthok matetika. Ny tanky sy ny hira DPS tokony hialany izany manalavitra azy raha vantany vao manomboka manipy azy satria mety izany avelao izy ho faty. Ny tsara indrindra dia raha ny tanky no manetsiketsika azy manodidina ny efitrano mba tsy ho voa mafy araka izay tratra. Mazava ho azy, tsy tokony hisy olona manitsaka ilay Rift avelany amin'ny tany, raha tsy izany dia hanimba be dia be izy.
Nandritra ny ady, Ulthok dia ho tezitra ho an'ny 10 manimba fahasimbana lehibe amin'ny tanky. Raha sanatria "kiting" anao manodidina ny efitrano ny tanky dia hisoroka ny ankamaroan'ny fahasimbana io. Raha tsy izany dia tokony hampiasa fahaiza-miaro izy mba hahatonga ireo segondra ireo ho zaka kokoa.
Ireo mpanasitrana dia tsy maintsy miantoka fa ny fahasalaman'ny mpilalao dia mijanona ho avo, raha tsy izany, rehefa Ulthok famihinana amin'ny mpilalao (na ny tenany) dia mety ho faty izy. Ary koa, isaky ny afaka manao izany izy ireo dia tokony hanafoana ny vokatr'izany Ozona amin'ny harerahana.
Amin'ny maody mahery fo, mitombo tsy miato ny fisidinana manerana ny efitrano. Amin'izany fomba izany dia manjary ilaina ny fametrahana toerana satria ho foana ny habaka. Raha tsy mahavita be ny fahasimbana dia ho avy ny fotoana izay tsy azo atao intsony ny manohy ny tolona.
Miteny i Erunak Stone ary manana fahefana i Ghur'sha / Mpanoratra vato Erunak & Mindbender Ghur'sha
fahasalamana: 1,787,160 - 4,979,640
ambaratonga: 84 / 87
Miteny i Erunak Stone:
Fivoahana lava: Mandrotsaka lahatra anidina amin'ny tanjona kendrena, miatrika 18,850-21,150 / 56,991 sy 63,891 teboka misy fahasimban'ny Afo ary atsipazo any aoriana.
Sombin-tany: Atsipazo tsipika mankany amin'ny mpilalao sendra. Rehefa tonga any amin'ny toerana nalehany ireo spikes dia nipoaka izy ireo ho any amin'ny pika lehibe kokoa izay mahatratra 1,885-2,115 ny fahavoazana isaky ny 0.5 seg ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 5 metatra.
Magma splash: Fifanarahana eo anelanelan'ny teboka 18,850 sy 21,150 amin'ny fahasimban'ny afo ao anaty kônô eo alohan'i Erunak. Ho fanampin'izay, ny tanjona dia hahatratra 2000 Afo isan-tsegondra mandritra ny 10 segondra.
Ember Strike: Manimba fahasimbana fitaovam-piadiana 100% satria simba ny afo ary mijaly amin'ny tanjona Ember Strike. Ity vokatra ity dia eo anelanelan'ny teboka 1,885 sy 2,115 an'ny fahavoazana amin'ny afo isaky ny simba ny melee no lasibatra. Maharitra 10 segondra.
Misoroka ody: Voaro ao anatin'ny ampinga ny Mindbender izay mifoka ny fahasimban'ny tsipelina rehetra. Voasintona avokoa ny fahasimbana rehetra, manasitrana anao intelo noho ny habetsaky ny alaina. Maharitra 3 / 5 segondra.
manandevo: Mitsambikina eo an-dohan'ny mpilalao an-tsokosoko ary ampidiro izy. Hahita fahasalamana, fahasimbana ary fanasitranana bebe kokoa ilay niharam-boina raha mbola tsy maty izy. Ity vokatra ity dia maharitra 30 / 60 segondra na mandra-pahalatsaky ny 50% ny fahasalaman'ny niharam-boina.
Zavona saina: Miantso ny faritra mirefy 10 metatra manodidina ny Ghur'sha Mindbender. Ny fahavalo rehetra ao anatin'ny zavona dia tsy afaka hanafika na hamosavy ary handrava eo anelanelan'ny 471 sy 528 Shadow isaky ny 0,5 segondra raha ao anatiny. Maharitra 20 segondra.
Fijaliana tsy hita noanoa: Mahatonga ny fahavalo manodidina rehetra hijaly mangirifiry, manome 1,885-2,115 teboka fahasimban'ny Shadow isan-tsegondra 10 segondra.
Rehefa miditra amin'ny efitrano isika dia ho hitantsika fa manana ny horita eo an-dohany i Erunak Stonespeaker (haneno anao izany raha nanao ny iraka Vashj'ir ianao). Mahatonga antsika hankahala antsika izany ka tokony hanozongozona azy isika mba hialana amin'ny katsentsitra.
Ny tanky dia tokony hisambotra azy ary hametraka azy amin'ny lamosiny amin'ny sisa amin'ny vondrona misy azy Magma splash, misy fiantraikany amin'ny mpilalao rehetra eo alohany, dia mety hampihena ny fahasalaman'ny vondrona haingana. Ho fanampin'izay, hampiasa ianao Fivoahana lava y Sombin-tany manohitra mpilalao amin'ny fomba tsy kisendrasendra amin'ny fanipazana azy ireo mihemotra, manelingelina ny famosaviana ozona. Ary koa, hampiasa i Erunak Ember Strike manohitra ny tanky, mamela azy io vokany majika izay tsy maintsy esorin'ny mpitsabo araka izay azo atao.
Raha vantany vao nesorinay ny 50% -n'ny fahasalamany, dia hitsambikina avy any an-dohan'i Erunak ny horita, hamotsotra azy tsy ho voafehiny. Raha tokony hanampy antsika hamita ilay asa izy dia handohalika amin'ny tany izy ka aza manantena zavatra avy aminy.
Ho hitantsika tsy ho ela izay tianao manandevo amin'ny vahoaka. Hisafidy mpilalao kisendrasendra izy ary hapetraka eo an-dohany. Ity mpilalao ity dia hampitombo ny fahasalamana ananany ary tsy maintsy ahenantsika 50% raha tiantsika hiala aminy izy. Ny fahavoazana rehetra ataontsika amin'ny
Raha mbola tsy manandevo olona izy dia handefa Fijaliana tsy hita noanoa misy fiatraikany amin'ny mpilalao rehetra. Ho fanampin'izay, hipetraka izy io Zavona saina ambanin'ny. Mila esorinao haingana any io mba tsy terena hijanona ao ny melee DPS.
Farany, tsy maintsy ho fantatsika izany Misoroka ody Satria ny fahasimbana majika ataontsika aminy dia hahasitrana azy, hampitombo ny faharetan'ny tolona. Ity vokatra ity dia azo esorina.
Hanandevo ny mpilalao salan'isa in-3 ny Dominikana alohan'ny handresena azy.
Fotoana fahatezerana: 5 minitra
Ozumat dia ady tsy manam-paharoa, ary io no farany ho hitantsika amin'ity trano-maizina ity. Rehefa miditra isika dia hahita an'i Neptulon izay, na dia iray amin'ireo tompo-marika fampiasa aza, dia tsy manohitra antsika ary hanampy antsika amin'ny ady amin'i Ozumat. Tsy iza izany fa ny horita izay manodidina ny lava-bato hatrany.
Ady mazava mizara telo izany.
Amin'ity dingana ity dia misy murlocs kely hipoitra avy amin'ny lalina sy ilay kely tsy misy endrika. Hiezaka ny hanafika an'i Neptulon izy ireo ary samy tsy hanimba be loatra. Ny DPS dia afaka mampiditra azy ireo mora foana nefa tsy mila fanampiana avy amin'ny tanky. Indraindray dia misy Behemoth tsy misy herim-po (endrika tsy manam-paharoa) miseho izay mila alefa tankina ary afindra manodidina ny efitrano satria misy fanafihana io ka mahatratra ny 25,000 isa ny fahavoazana.
Tsy hiseho intsony ny bolongam-bato avy any amin'ny lalina ary koa ny behemoth. Fa kosa, bibikely sy Lasera Vicious 3 no hiteraka. Ity farany dia handefa zavatra amin'i Neptulon, hamela azy ho tsy misy ilana azy ary hanimba tsikelikely. Raha maharitra ela loatra ny famonoana azy ireo isika, tsy hoe manakaiky ny fotoanan'ny fahatezerana fotsiny isika, fa mety hahatonga an'i Neptulon ho faty koa.
Ity no dingana sarotra indrindra tsy misy fisalasalana satria ny Tank dia tsy maintsy mitandrina ny famindrana ireo biby ary azo inoana fa mbola miaina velona ihany ilay Behemoth tsy azo idirana. Ny DPS dia tokony hifantoka amin'ny fanesorana ireo Lashers (tsy mila ampidirina tanky) haingana izy ireo na dia tokony hanala ny sasany amin'ny lanjan'ny tanky izay hanana Blast Beasts isan-karazany manenjika anao aza.
Toy ny hoe tsy ampy izany, hiseho eo amin'ny sehatra i Ozumat, manolo-tena amin'ny fanipazana puddles amin'ny ranomainty amin'ny tany izay tsy maintsy hialantsika mba tsy hahazo simba fanampiny.
Vantany vao vita amin'ny Vicious Lashers isika dia hiroso amin'ny dingana 3.
Raha vantany vao manafaka ny tenany amin'ireo nisambotra azy i Neptulon, dia hampiasa ilay vondrona izy Herin'ny onja. Mitombo be ary mahazo fitomboana lehibe eo amin'ny fahasalamana sy fahasimbana. Lasa hazakazaka DPS ity dingana ity satria hanomboka i Ozumat Ozumat Blight manerana ny gorodona. Mampiditra teboka 200 izy amin'ny voalohany saingy miangona hatramin'ny 200 heny izany, ka tsy afaka sitrana.
Na izany aza, miaraka amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana sy fahasimbana azontsika, tsy sarotra ny hahatratra ny faran'ny fihaonana ary handrava an'i Ozumat. Ny zavatra sarotra dia ny mampifantoka ny tena amin'ny tena satria mitombo be ny toetrantsika ary tsy zatra izany isika.
Video any an-tranomaizina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Tranomaizina » taorian'ilay loza » Ny seza fiandrianan'ny tide / torolàlana an'ny torolàlana mahery fo sy mahery
Androany amin'ny sasakalin'ny alina isika no eo amin'ny hetsika
Tongasoa eto amin'ny fanontana vaovao an'ny GuidesWoW!